Daawo Sawiradda:Kulan Dhexmaray M/kuxigeenka K/Galbeed Somaliya iyo Waxgaradka Gobolka Shabeellaha Hoose Oo Ka Dhacay Degmada Marka Cadey. – idalenews.com
Daawo Sawiradda:Kulan Dhexmaray M/kuxigeenka K/Galbeed Somaliya iyo Waxgaradka Gobolka Shabeellaha Hoose Oo Ka Dhacay Degmada Marka Cadey.
Kulan balaaran oo ay isugu yimaadeen wax garadka iyo culumaa’udiinka gobolka shabeeaha hoose ayaa maanta waxaa uu ka dhacay degmada marka ee xarunta gobolka sh.hoose, kulankaan ayaa waxaa looga hadlay sidii loo taageeri lahaa maamul goboleedka koonfur galbeed somaaliya iyadoo maalmahan ay gobolka ku sugnaayeen wafdi uu hogaaminaayo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi mudane maxed xasan fiqiiyo qeeb ka mid ah golohiisa wasiirada.
Mudane maxamed xasan fiqi oo kulankaani ka qeeb galay ayaa warbixin dheeraad ah ka siiyay waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka, waxaana uu balan qaaday in maamulkiisa uu wax badan ka qaban doono dhibaatooyinka uu la daala dhacaayo gobolka sh.hoose. waxaa uu sheegay in gobokaani uu soo maray dhibaatooyin fara badan haatana la joogo xilligi dadka deegaanka ay aayahooda ka tashan lahaayeen. waxaa uu sheegay mudane fiqi in booqashadiisa ay gogol xaar u tahay booqasho uu ku imaan doono madaxwenaha maamulka koonfur galbeed mudane mad keeer.
Waxgaradka gobolka sh.hoose ayaa iyagana dhankooda balan qaaday inay la shaqeyn doonaan maamulka koonfur galbeed iyagoo si heersare ah usoo dhoweeyay qorshaha mudane fiqi uu ku yimid gobolkaani.
gobolka sh.hoose ayaa waxaa uu soo maray marxalado kala duban, waxaa ka dhacay dhibaatooyin aad u farabadan oo lagu wax yeeleeyay dadka degan gobolkaan. maamulkaani ayaa u muuqda mid gobolka sh.hoose ka samata bixin doono dhibaatooyin hore uu usoomaray iyo kuwa hada kusoo fool leh.
Dhageyso :wareysi siyaasi Yusuf Cali boore oo Laga wareystay kulankii maanta ay laqaateen Madaxweyne kuxigeenka koornfur galbeed somaaliya.
Dhageyso: Sheekh Fu’aad Shongele” waxaa jiro beelo nagula soo biiray dagaalka Kenya”.